हृदयाघात के हो ? किन हुन्छ यूवा अबस्थामै हृदयाघात ? - Myagdi Online
करिब सात महिनाअघि अस्पतालको इमर्जेन्सीमा २० वर्षका एक युवालाई ल्याइयो । हृदयाघात भएरै ल्याइएका उनको केन्द्रका सिनियर कन्सलटेन्ट कार्डियोलोजिष्ट डा. यादवदेव भट्टले सफल शल्यक्रिया गरे ।
चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ
उच्च रक्तचाप पनि हृदयाघातको अर्को कारण हो । समयमा रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नेहरूले हृदयाघातको सामना गर्नु परिरहेको चिकित्सकहरूको भनाई छ । उच्च रक्तचापले दबाब बढाउँदा रक्तनलीमा विभिन्न थेग्रोहरू जम्न मद्दत पुयाउछ र त्यो प्रक्रिया बढ्दै जादा रगतको प्रवाह बन्द हुने डा. रेग्मी बताउँछन् ।
हृदयाघात हुँदा छातीको बीच भागमा असह्य पीडा उत्पन्न हुन्छ । छातीको मध्यभागमा देब्रेतिर कुनै गह्रौं चीजले थिचेर असह्य पिडा भएको जस्तो महसुस हुने गर्दछ । यसका साथै पेटको माथिल्लो भाग, पिठ्युँ र देब्रे काँधमा सहनै नसक्ने गरी पीडा हुने गर्दछ । हृदयाघात भएका व्यक्तिलाई एक्कासी श्वासप्रस्वासमा समस्या आउने, पसिना आउने र वाकवाकी आउने हुन थाल्दछ ।
यसैगरी, दम बढ्नु, खुट्टा सुन्निनु, मुटु बेतालले धड्कनु, चक्कर लाग्नु, घाँटीको रक्तनली फुल्नु वा चल्नु, साथमा ज्वरो पनि आउनु, जिब्रो, औंलाका टुप्पा नीलो हुनु पनि हृदयाघातका लक्षण हुन् । हृदयाघात भएका व्यक्तिले समयमै उपचार नपाए रोगीको तत्काल मृत्यु हुन सक्छ । हृदयाघात हुने लगभग एकतिहाइ मान्छेको अस्पताल नै पुग्न नपाई मृत्यु हुन्छ । हृदयाघातपछि अस्पताल पुग्ने ९० प्रतिशत बिरामी सामान्यतया बाँच्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाई छ ।
होमियोप्याथिक उपचार पदति एकदमै सरल सुलभ र इफेक्टिभ चिकित्सा विज्ञान हो 14 दिन अगाडि
स्वास्थ्य शिवीरबाट एघार सय लाभान्वित3महिना, 26 दिन अगाडि
पाठेघरसम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा तीनसय बढी लाभान्वित (फोटोफिचर)4महिना, 8 दिन अगाडि
म्याग्दीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हुँदै4महिना,9दिन अगाडि
किशोरी अवस्थामै पाठेघरको समस्या4महिना, 18 दिन अगाडि
गूर्जामा कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन तालिम, ओटिसी सेन्टरबाट सेवा सुरु4महिना, 25 दिन अगाडि
जानी राखौं सपनामा सम्भोग गरेको देखेमा के अर्थ लाग्छ5महिना, 28 दिन अगाडि
पोखरेबगरमा निशूल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिवीर सम्पन्न6महिना, 19 दिन अगाडि
रातिको खानापछि के गर्ने के नगर्ने ?6महिना, 20 दिन अगाडि